China SSM-350 / 500-23 / 35C VOV Patent Diamond Hụrụ Agụba maka Concrete Road emepụta na suppliers | Ngwaọrụ Shuangshi
Maka Ọdụ ụgbọ elu
Maka okporo ụzọ
N'ihi na Wall uzo-Granite
SSM-350 / 500-23 / 35C VOV Patent Diamond Saw Blade for Concrete Road
Soplaya / wholeslaer / emeputa nke 14 "(376mm) 23T diamond ịcha pupụtara / hụrụ UM UBARA / okirikiri pupụtara maka ụzọ
Zitere anyị email Budata PDF
Product Ihe SSM-350-23C / SSM-500-35C
Net arọ (g) 1.9kg / 4.4kg
Ọnụ ọgụgụ nke Ezé 23T / 35T
Ezigbo Elu 18mm
Agụba dayameta 14 "(376mm) / 20" (526mm)
Disc Bore Size 2 "(50mm)
Ọkpụrụkpụ Agụba 3.2-3.4mm / 3.6-3.8mm
Ọnọdụ tingcha Wet
Nke a 350mm / 500mm diamond hụrụ UM UBARA maka iji belata ọdụ ụgbọelu na okporo ụzọ. Ọ na-adịgide adịgide, ma nwee oke arụmọrụ. Ọ ndibọhọ anụ ụlọ ahịa si agbanwe agbanwe nnukwu otuto.
A na-eji mpempe akwụkwọ diamond a mee ihe iji jiri ya mee ihe maka ịkpụ ihe dị iche iche. The elu-edu ígwè isi na-expertly tensioned maka ezi he na kwukwara anwụ ngwa ngwa. Onye ọ bụla agụba na-egosipụta ihe ndị kasị mma diamonds na agba na-laser welded maka agbakwunyere anwụ ngwa ngwa na mma ọnwụ arụmọrụ.
Safety: Akwa ike nke agụba na matriks nkịtị ike
Nkọ ff Oru oma nhazi arụmọrụ, anụ mma
Zuru okè im Kachasị usoro ọzọ finely ọdịiche dị iche ahịa ọkachamara
Ent Jiri mmụọ nke onye omenkà rụọ ọrụ, tụlee nkọwa zuru ezu
Elite Max Technology na-eji usoro pụrụ iche na imepụta ihe ọhụụ na mpaghara ọ bụla. Oke mma DeBeer ola diamond edobere nke ọma na akụkụ 3 na -emepụta mmetụta na-ekpuchi nke na-enye ohere ka akwa ọla edo ndị ọzọ na-abịa nke nta nke nta. Nke abụọ n'ígwé nke diamonds na-gụrụ mgbe mbụ oyi akwa ka na-ịcha na-enye gị kacha ọnwụ ọsọ, na kacha agụba ndụ, El Elite Max Advantage.
Ezubere iji ya mee ihe na njem dị elu n'azụ hụrụ 72 CV. Anyị kasị ọkwa diamond a pụtara n'ụzọ dị irè bee ọkara na-ajụ-ike gwọrọ ihe ma na-anapụta a ogologo agụba ndụ. Akụkụ welded laser na-egbochi ọnwụ nke akụkụ ma na-enye ohere ka ejiri naanị agụba mee mmiri.
Kedu otu esi ahọrọ nri mmiri diamond dị mma maka ọrụ m?
Mgbe ị na-ajụ a diamond agụba ere banyere ha diamond pupụtara, ha ga-eleghị anya na-enye gị kpochapụwo "ezi sharpness & ogologo ndụ" na-akọwa ha na ngwaahịa.
Tupu ị na-amalite ịhọrọ diamond hụrụ agụba maka ịcha ihe, ị ga-mara na-akwụ ụgwọ nke diamond pupụtara na ọnwụ N'ihi, nke dị gị mkpa. Ọ bụrụ na ọ bụ obere ọrụ na ị nweghị nnukwu ihe achọrọ maka ịkpụ nsonaazụ, ọnụ ala diamond hụrụ mma ga-adị mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ngwa ngwa na-eji ire ụtọ ọnwụ, ọ dịghị chipping na ogologo lifespan, ihe ndị magburu onwe diamond hụrụ agụba ga-abụ ndị ọzọ na-eri-irè.
Pasent nke ngwaọrụ ：
Carbon bughi ígwè matriks
65 Mn matriks ígwè siri ike
High ọkwa diamond
Ogo ma ọ bụ karịa
Arụrụ ụlọ alloy ntụ ntụ
Okporo ụzọ na-egbutu,
Okporo ụzọ nkume granite
nkume nzu nzu
Ndakọrịta Ngwá Ọrụ
Nke gara aga: SSM-350-23A VOV Ezigbo Icha Ezé Maka Roadzọ
Osote: SSM-500-35A / B VOV Patent Ezé Diamond Cutting Agụba maka AirPort
SSM-350-23A VOV Patented Ezigbo tingcha Agụba n'ihi ...
SSM-500-35A / B VOV patented Ezé Diamond Cuttin ...
Ị NWERE Shuangshi
LET & nbspUS & nbspKNOW
Banyere & nbspUs
Kpọtụrụ & nbspUs